Musharrixiinta Madaxweynaha oo u khudbeynaya kuraas maran | KEYDMEDIA ENGLISH
Musharrixiinta Madaxweynaha oo u khudbeynaya kuraas maran
Musharrixiinta Madaxweynaha, mid kasta oo ka mid ah, wuxuu bixiyay $40,000, wuxuuna xaq u leeyahay in Xildhibaannadu dhageystaan barnaamijkiisa siyasadeed, yeelkeede, taasi ma dhicin, xubnaha Golayaashuna, waxa ay khudbooyinka kala socdaan TV-yada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa meel dhexe mareysa hadal jeedinta musharrixiinta Madaxweynaha ee maalinta 1-aad, iyadoo qorshuhu yahay in 20 musharrax maanta hadal jeedin-tooda sameeyaan, halka 19 kale Khamiista berri ah hor tagi doonaan Baarlamaanka.
La-yaabka, ayaase ah, in xildhibaannada maanta xaadiray teendhada Afisyooni ee dhageysanaya hadal jeedinta musharrixiinta ay tiradoodu aad u yar tahay, waxaana la isweydiinayaa sababta ka danbeysa in matalayaasha shacabku xaadiri waayaan kulanka?
Howl-wadeennada Golaha Shacabka, ayaa KON u sheegay in Qarax saaka barqadii ka dhacay agagaarka KM4 uu sababay in Xildhibaannadu soo gaari waayaan teendhada Afisyooni, hayeeshee, sax ahaanshaha dooddaas qudheeda ayaa su’aal la galiyay.
Sida sharciga ah, kala fadhiga baarlabaanku waa inuu ku furmo labo meelood meel, maantase taasi ma dhicin oo 166 xildhibaan ma xaadirin Afisyooni si ay u dhagaystaan hadaljeedinta Musharrixiinta, berri ayaa la saadaalinyaa in xaalku intaan ka roonaado.
Caadiyan dadka siyaasadda falanqeeya wax ay ku doodayaan in Xildhibaannadu ay akhrin buugaagta ay ku qoran yihiin ajandaha siyaasadeed ee musharrixiinta, isla-markaana aysan weeleyn khudbooyinkooda, maadaama ay ku tashanayaan in ay codadkooda iibsadaan.